Nlegharị Anya Anya Ndị Ahịa Ezumike | Martech Zone
Friday, December 7, 2018 Friday, December 7, 2018 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịdenyeghị aha, ana m akwado ndị a Chee echiche na Google saịtị na ala. Google weputara ufodu ihe di itu n'anya iji nyere ndi na ere ahia na aka ha aka itolita ahia ha na ntaneti. Na ederede na nso nso a, ha mere nnukwu ọrụ na iji anya nke uche hụ njem ndị ahịa 3 na-ahụkarị malitere na Black Friday:
Thezọ na-ere ahịa na-atụghị anya ya - na-amalite site na nyocha mkpanaka, njem ahụ na-enye nghọta n'ime otu mmadụ nke na-azụ ahịa n'ịntanetị.
Mkpebi ịrụzi ma ọ bụ dochie anya - onye ọzọ na-enyocha site na desktọọpụ wee gaa na mkpanaka, yana mmekọrịta na mgbasa ozi iji mezuo mkpebi ịzụta.
The Epic egwu egwuregwu ịchọ - onye na-egwu egwuregwu na-enyocha nyocha njikwa ọzọ ya, na-eme nyocha site na mkpanaka na desktọọpụ, na-eleta saịtị ndị na-ere ahịa na saịtị ụlọ ọrụ iji nyochaa nzụta ya ọzọ.
Google na eweputa otutu uzo di iche iche, tinyere otutu ihe nyocha ndi ahia na eme, ịdabere na mkpanaka, na eziokwu na ndi ahia a adighi ele anya na onyinye.
Ọ ga-amasị m ka ị lekwasị anya n'akụkụ ole na ole ekwesighi ịpụta:
Ndị mmadụ bounyere n'etiti ngwaọrụ na ndị na-ajụ ndị mmụọ ase - N’oge na-adịbeghị anya, azụtara m PlayStation ọhụrụ. Anọ m na ekwentị m ntakịrị oge ka m na-ele telivishọn, na-agụ nyocha ma na-ele ùkwù. Mgbe ahụ, mgbe m ga-anọdụ ala na tebụl m, m ga-elele vidiyo ma lelee vidiyo nyocha. Ọbụna m gara BestBuy ugboro ole na ole iji hụ ihe ha nwere. Otu enyi m bụ nnukwu egwuregwu, yabụ mụ na ya kparịtara ụka na Facebook wee mee mkpebi banyere ihe m ga-azụ. N'ikpeazụ, achọtara m ọnụahịa dị ukwuu ma zụta ya n'ịntanetị site na Wal-mart. Ya mere .. mkpanaka, desktọọpụ, ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe, nyocha, na ụlọ ahịa na-arụ ọrụ na njem m.
Ndị mmadụ na-etinye oge dị ukwuu nyocha - Njem ndị a abụghị n'otu nnọkọ, ha karịrị izu na ọnwa. Ọ dị mkpa icheta na kuki na-agwụ, mkpọsa gbanwere, nsonaazụ ọchụchọ na-agagharị… mgbe onye na-azụ ahịa na-enyocha mkpebi ịzụ ahịa ha ọzọ. Ka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị wee bụrụ nke a na-ahụ anya, ị ga-anọgidesi ike n'ile anya ma baa uru na ha.
Ndị mmadụ na-eri ọtụtụ nyocha ọdịnaya - Enweghị m ike ịgwa gị ọtụtụ ihe m gụrụ, lelee, ma tụlee tupu ịzụrụ sistemụ m. Aga m agwa gị na mkpebi izu m zụrụ ka m gara n'ihu nyocha, n'agbanyeghị. Emechara m jiri ngwa PlayStation m zụta ihe Pro na VR mgbe m hụrụ nyocha ma lelee vidiyo banyere ike. Ozugbo m nwetara sistemu ahụ, agara m ahịa ọzọ iji nweta ngwa ndị ọzọ! Ọ bụghị naanị na ọdịnaya mere ka mkpebi m sie ike, ọ kpalikwara ahịa ndị ọzọ.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, N'ime njem ịzụta nke ndị ahịa 3 na-achọ kwa ụbọchị:
Tags: onye zụrụịzụ ndị ahịanjem ndị ahịaNyochaChọọ Marketingmkpebi mkpebichee na GoogleWalmart
Ndụmọdụ Kachasị Mma Maka Usoro Azụmaahịa Millennium Na-aga nke Ọma